नेसनल हाइड्रोपावरको साधारण सभा आज, फेरिपनि लगानीकर्ताको हात खाली
काठमाडौं : नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले आज बिहीबार असार ३१ गते वार्षिक साधारण'सभा आयोजना गर्दैछ । सभा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं विनायकनगरमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिकप्रतिवेदन…
Sleep playsavery important role in your physical health. for instance, sleep is concerned in healing and repair of your heart and blood vessels. in progress sleep deficiency is connected to associate enhanced risk…
काठमाडौँ :- हाम्रो खानामा आलु सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारीमा पर्छ । आलुलाई हामीले अन्य तरकारीसँग पनि मिसाएर बनाउने गर्छौँ । त्यसैले आलुलाई तरकारीको राजा पनि भनिन्छ । तर, हामी मध्ये धेरैले आलु को प्रयोग…